Maxay tahay sababta ay kooxda Juventus kaga hartay heshiiska Samuel Umtiti??? – Gool FM
(Italy) 19 Abriil 2019. Juventus ayaa dooneysa inay xoojiso daafaca kooxdeeda kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo socda, waxayna xiiseeneysaa inay sameyso saxiixyada difaacyo tayo sare leh.
Waxaa jira dhowr magacyo ee dhawaantan lala xiriirinayay kooxda Bianconeri, waxaana ka mid ah magacyada ugu muhiimsan ee lala xiriirinayay daafaca reer France ee kooxda Barcelona Samuel Umtiti.
Ila wareedyo badan ee dhanka saxaafada ah ayaa waxay xaqiijiyeen in kooxda Juventus ay xiiseeneyso lasoo saxiixashada Samuel Umtiti, hadii ay ku fashilmaan raacdada ay ugu jiraan saxiixa Matthijs de Ligt, kaasoo la filayo inuu u wareego Barcelona xilli ciyaareedka soo aadan.
Juventus ayaa dooneysay inay kaga faa’iideysato saxiixa Samuel Umtiti, imaatinta Matthijs de Ligt ee kooxda Barcelona, maadaama ay ku adkaan doonto in uu boos joogta ah ka helo kooxda.
Si la mid ah Samuel Umtiti ayaa xili ciyaareedkan u lumiyay fursadihii uu ka heystay kooxda Barcelona daafaca ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Clément Lenglet, kaddib in mudo ah uu dhaawac kaga maqnaa garoomada.
Hadaba waxaa jirta laba sababood waaweyn oo ay kooxda Juventus uga baxday raacdadii ay ugu jirtay heshiiska Umtiti, Sababta ugu horeysa ayaa dhaawacii halista ahaa ee kasoo gaaray dhanka jilibka, taasoo keentay inuu garoomada ka maqnaado inta badan kulamada xilli ciyaareedkan.
Halka sababta labaad ay tahay in hadii kooxda Barcelona ay iibineyso Samuel Umtiti ay dooneyso inay ku iibiso qiimo aad u sareeya ee ah inta u dhexeysa 80 ilaa iyo 100 million euros, laakiin Juventus ayaan dooneynin inay ku bixiso lacagtaas, ciyaaryahan inta badan ee xili ciyaareedka ku mashquulsan rugta caafimaadka.
“Barcelona wali lama kulmin koox ku jirta qaab ciyaareedkeena” - James Milner